Archive du 20190506
Fiahiana ara-tsosialy Tsy maintsy hampidirina CNaPS ny mpiasa rehetra
Niompana bebe kokoa tamin`ny fanatsarana ny asa sy ny tontolony eto Madagasikara ny filankevitry ny minisitra ny zoma 03 mey lasa teo.
CT Motors Namoaka ny Cross-Car RZR XP TURBO S
Tsy mitsahatra mamoaka zava-baovao hatrany ny orinasa Polaris CT Motors isan-taona.
Mahaiza ary mifidy e!
Raikitra izany ity fampielezan-kevitra! Samy manana ny fomba hoentiny manantanteraka izany ny kandida isanisany, ary hanao izay faharaheriny handresen-dahatra ny mpifidy.
Findramam-bola eny amin’ny banky Manahirana ny orinasa madinika sy salantsalany
Efa saika miroso tsikelikely amin’ny findramam-bola avokoa ny Malagasy amin’izao fotoana izao mba hanohanana ny sehatry ny asany sy ny fihariana ataony.
Vondron’ny vehivavy mpandraharaha Nanome fiofanana tany amin’ny faritra
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Vondron’ny vehivavy mpandraharaha na ny “Groupement des femmes entrepreneurs” tarihin-dRazakaboana Fanja,
Mpanendaka iray nikoizana hatry ny ela lavon’ny balan’ny mpitandro ny filaminana teny 67Ha
Anisan’ny voasokajy ho tena faritra mena ny eny amin’ny 67 ha sy ny manodidina amin’izao.
Vao tamin’ny zoma teo no nisy ny fanasoniavana fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny holafitry ny mpanao gazety sy ny mpitandro ny filaminana.
ANKIZY VAVY 11 TAONA BEVOHOKA Tsy nanano sarotra ny fiterahany
Zazavavy 11 taona mahery bevohoka, mbola nanohy nilalao niaraka tamin’ireo ankizy namany izy tamin’izany,
Tanjon’ny fampandrosoana holovain-jafy Arahimaso hatrany I Madagasikara
Manomboka indray ny atrikasa etsy sy eroa eto Madagasikara indrindra amin’izao fahataran’ny firenena Malagasy amin’ny fampandrosoana izao.